Kudzima magetsi zuva Vagadziri & vatengesi - China kudzima magetsi ezuva fekitori
Yakakwira-Hunhu Kudzima magetsi Roller Anopofumadza Micheka
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric inogadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Tinogona kupa 200/230/250/300 cm hupamhi hwakasiyana hwindo rako, uye urefu hwakaenzana iamamita makumi mana pamupumburu. Yakasimba simba polyester machira anoita emicheka yedu 'simba yakapetwa ka4 kupfuura nylon uye kakapetwa makumi maviri pane viscose; Kusimba kwakanaka kunoita kuti zvigadzirwa zvedu zvive zvakasimba, zvinogara, kuunyana kuunyana. Kunze kwezvo, jira redu repolyester rine kupisa kwakanyanya kupisa uye kupisa kwekushisa. Havasi muforoma, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana mutswe pashure refu-nguva kushandiswa.
Iine mbiri yakapetwa kumeso giraidhi yekunamira nzira, iyo inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka yekuchengetedza kunze kwechiedza. Yedu machira ndeyekudzivirira moto uye isina mvura, inogona kupfuura NFPA701（USA)chitupa, uye kutsanya kwemavara kana Giredhi 4.5. Yakakwira-mhando yakasvibirira polyester material inoita machira edu ave akakurumbira pakati pevatengi vedu. Iyo yakakodzera chikoro, hofisi, uye imba. Tinogona kupa mahara emahara iwe!
Yakakwira-Yemhando Roller inopofumadza Machira Polyester kudzima magetsi
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric ndechimwe chezvinhu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Yakagadzirwa ne100% polyester. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanakisa, chine rupo, uye chinoshamisira. Tinogona kupa 200/230/300 hupamhi hwakasiyana kuti iwe usarudze kubva. Kurema kwejira redu kunosvika 360gsm pa mita. Neruvara rweglue uye furo chena yekumira nzira, jira redu rekudzima rine mhando yepamusoro. Tine anopfuura gumi mafashoni mavara iwe. Uye isu tine mhando dzakasiyana dzesarudzo yako, unogona kusarudza chero munhu.
Yedu machira ndeyekudzivirira moto uye isina mvura, inogona kupfuura NFPA701（USA)chitupa, uye kutsanya kwemavara kana Giredhi 4.5, izvo zvinoita kuti inakirwe nemukurumbira wakakwirira pakati pevatengi vedu. It's akakodzera kwazvo chikoro, imba, uye hofisi kushandiswa. Chii'' Zvimwe, isu tinogona kupa mahara sampuli kwauri!
Inowindow Window Inovhara Blackout Mucheka WeHofisi
Sunetex Indoor Window Blinds Blackout Fabric YeHofisi inogadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Iyo yakasimba, isina chakuvhuvhu uye isina chipfukuto. Tine akawanda marudzi eakara mavara kwesarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira. Yedu micheka haina mvura uye kudzivirira moto. Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika yezvemamiriro ekunze, isina-chepfu uye isina kunaka izvo zvinogadzira nharaunda yakasununguka kwauri. Ita vatengi vedu rugare rwepfungwa kana tichishandisa zvigadzirwa zvedu.
Jacquard Roller Anopofumadza Mucheka Kudzima magetsi
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series zvigadzirwa zvakagadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro. Isu tinopa micheka yejacquard nenzira dzakasiyana dzekunamatira. Yakapetwa kumeso dhizaini-yekumhanyisa nzira inogona kugadzira micheka yekudzima magetsi, furo chena yekumira nzira inogona kugadzira machira erima. Zvigadzirwa zvedu zvakakodzera chikoro, hofisi, uye imba. Gamuchirai mameseji enyu!
Sunetex Jacquard Roller inopofumadza Mucheka unofarira mukurumbira wepamusoro pakati pevatengi vedu. Tine mhando dzakawanda dzemicheka yesarudzo yako, chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanakisa, chine rupo, uye chinoshamisira. Uye isu tine timu yakanaka yekuti iwe unogona kukupa seyakanaka sevhisi, isu takanangana nechero yevatengi yakanaka sevhisi ruzivo uye edza kuumba inodziya mamiriro. Kune yedu yekutanga kubatirana, tinogona kukupa mahara sampuli kuti utarise mhando uye ruvara.
Yemazuva ano Kushongedza Roller Bofu Mucheka Kudzima magetsi
Sunetex Yemazuva Ekushongedza Roller Blind Fabric Blackout inogadzirwa ne polyester. Kupopota Ruvara Rwokupfeka inoita kwete chete kudzima magetsi, asiwo fashoni. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Hurefu hwakaenzana i200cm uye 230cm. Kurema kwakaringana kuri 330gsm pa mita imwe chete. Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro. Tine mavara akasiyana siyana esarudzo yako.
Sunetex Yemazuva Ekushongedza Roller Blind Fabric Blackout inonakidzwa nemutengo wepamusoro wekutengazve muvatengi vedu. Iine machira emhando yepamusoro, inogara yakasimba uye hupenyu hunogona kuve makore gumi. Isu tiri vagadziri, tinotengesa zvinhu kune vatengi vedu zvakananga, zvinogona kukubatsira nekusiya mari yepakati. Kubatira pamwe kwekutanga, tinogona kukupa mahara emahara.
Nyowani Dhizaini Roller Blind Fabric Kusviba
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric inogadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Iine mbiri kumeso giraidhi yekunamira nzira, inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka mukuchengetedza kunze kwechiedza uye wega kuchengetedzwa kwega. Yakanaka mhando polyester zvinhu zvinogona kuita kuti igare, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva kushandiswa.
Tiri nyanzvi mugadziri inopofumadza kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Chinangwa chedu ndechekuti ive nyore-yekumira kutenga kune vatengi vedu. Isu tinovavarira kupa machira akakwana kune vatengi vedu. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri kwekutanga kubatana.
Nice Yemhando Roller inopofumadza Mucheka Kudzima magetsi
SuneTex Roller inopofumadza Mucheka ndechimwe chezvinhu zvedu zvinopisa zvinotengesa zvigadzirwa. Iyo yakagadzirwa ne polyester ine mhando yepamusoro uye nemutengo unonzwisisika. Ivo vanogadzikana kwazvo, hupenyu hwavo hunogona kuve makore gumi. Nehutano hwakanaka uye basa rakanakisisa, isu takakurumbira pakati pevatengi vedu. Isu tinopa 24hours sevhisi kune vatengi vedu kuti vakutsigire.
Nedipoti yekupfeka nzira, iyo inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka pamhepo uye mwenje. Iyo inogona kukubatsira iwe kuchengetedza simba. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa. Isu tiri vekutanga fekitori yekupa, kana iwe ukabatana pamwe nesu, iwe unogona kuve uine max margin. Yekutanga kubatana, tinogona kukupa mahara emahara kwauri!
Roller Blind Kudzima magetsi ekuvhara machira Jira 180g
Sunetex Roller Blind Blackout Curtain Fabric yakagadzirwa ne100% polyester mune yakanaka mhando. Neyakagamuchirwa yemhando yepamusoro mbishi zvinhu, inogadzira machira edu nesimba rakakwira. Isu tinopa micheka yejacquard nenzira dzakasiyana dzekunamatira. Iine ultrasonic yekucheka tekinoroji, izvo zvinoita kuti jira redu richeke zvakanaka. Tine mhando dzakawanda dzemicheka yesarudzo yako, chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira.
Isu takanyatso kudzora mhando yezvigadzirwa zvedu. Zvese zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye inonzwisisika mutengo. Chikwata chedu chinopa maawa makumi maviri nemana akanak sevhisi kwauri. Isu tiri tarisiro pane yega yevatengi yakanaka sevhisi yebasa uye tinoedza kugadzira inodziya mamiriro. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri!
Roller Blind kudzima magetsi Mucheka 100% polyester
Sunetex Roller Blind Mucheka wakagadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro. Huremu hwakaenzana i160 g pametre mita. Neye mbiri kumeso kunyudza kupfeka, jira redu rakadzima magetsi. Tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako.Chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, ivo vakanaka, vane rupo uye vane hunyanzvi. Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isina-chepfu uye isinganetsi iyo inoita nharaunda yakasununguka kwauri.
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa kwazvo pakati pevatengi vedu. Uye iyo inogona kukubatsira iwe inodzora mwenje, inoenderana mwenje mhedzisiro yemukati, shading uye tembiricha kudzora, uye ultraviolet dziviriro. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, isu tinoronga zvigadzirwa zvako, uye kana odha yako iri diki, usatombo kunetseka, isu tine zvakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa. Tinogona kukupa mahara emahara kuti utarise mhando uye ruvara.
Roller inopofumadza kudzima magetsi Fabric Polyester
Sunetex Blackout Roller Blind Machira akagadzirwa nepolyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Zvigadzirwa zvedu zviri zvemhando yepamusoro, zvinogara, hapana chakuvhuvhu uye hapana chipfukuto. Tine classical chena uye pfumbu mavara esarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira.
Iine mbiri kumeso kunyudza nzira yekuita iyo inoita, Sunetex Slubby Yarn Jira ndeimwe yedu yepamusoro yekutengazve chiyero zvigadzirwa. Inogona kukubatsira kuti ugadzirise mwenje wemukati, upe imwe nharaunda yakasununguka kwauri. Isu tinopa makore gumi garandi kune edu ese machira. Nehutano hwakanaka uye basa rakanakisisa, isu takakurumbira pakati pevatengi vedu. Kana iri yekutanga nguva yekudyidzana, tinogona kukupa mahara emahara kwauri.
Slubby Yarn Yakapofumadza Mucheka Furo Muchena Kuputira
Sunetex Slubby Yarn Blind Fabric inogadzirwa nemachira epolyester kudzima magetsi ane mhando yepamusoro. Iine furo chena kupfeka, inoita kuti jira idzime. Yepamberi michina uye tekinoroji zvinoita kuti icheke zvakatsetseka. Tine mavara akasiyana-siyana, unogona kuenzanisa chero ruvara rwaunoda.Tinogona kupa 200/230/250/300 cm hupamhi hwakasiyana hwindo rako, uye urefu hwakaenzana iamamita makumi mana pamupumburu. Tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako, unogona kusarudza chero imwe.
Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isina-chepfu uye isinganetsi iyo inoita nharaunda yakasununguka kwauri. Ita vatengi vedu rugare rwepfungwa kana tichishandisa zvigadzirwa zvedu. Chinangwa chedu ndechekupa yakanyanya kukodzera keteni mhinduro kune vatengi vedu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi 'saizi saizi. Tinogona kukupa iwe yakanakisa fashoni mhinduro. Tinogona kupa yekuisa rairo gwaro kune vatengi pasi rese.
Yakakwirira Plain Bofu Mucheka Kudzima magetsi
Sunetex Yakakwirira Plain Bofu Mucheka wakagadzirwa ne100% polyester ine simba rakakwira. Iyo ine kugona kwakanaka mukuita mumvuri. Iyo inogona kusefa ultraviolet mwaranzi, ita kuti hofisi yako ive yakasununguka kushanda. Iyo ine yakanaka yekufefetera mhedzisiro futi. Nesirivha yekumesa nzira, inoyevedza uye inokwidziridzwa. Uye zvigadzirwa zvedu zvakasimba kwazvo uye zvinogara. Tinogona kupa 200/230/250/300 cm hupamhi hwakasiyana hwindo rako, uye urefu hwakaenzana iamamita makumi mana pamupumburu. Tine mavara akasiyana siyana esarudzo yako.
Tiri nyanzvi mugadziri inopofumadza kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Isu tinotengesa machira ekupofumadza uye nezvimwe. Chinangwa chedu ndechekuti ive nyore-yekumira kutenga kune vatengi vedu. Kuita kuti hupenyu hwako huve nani, isu tinoedza nepatinogona napo kukupa iwe akakwana mapofu machira. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri kwekutanga kubatana.